काठमाडौँ महानगरका २७ वडामा मत गणना सम्पन्न, कसले कति मत पाए ? Nepalpatra काठमाडौँ महानगरका २७ वडामा मत गणना सम्पन्न, कसले कति मत पाए ?
काठमाडौँ महानगरका २७ वडामा मत गणना सम्पन्न, कसले कति मत पाए ?
वडा सदस्यमा कांग्रेसका चन्द्रमान डङ्गोल र दिनेशमान जोशी विजय भएका छन् । महिला सदस्यमा कांग्रेसका रेणु कमलभारती शाही र दलित महिला सदस्यमा रञ्जिता परियार विजय भएकी छन् ।
यसैगरी नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार केशव स्थापितले ३३ हजार ९८१ मत ल्याएका छन् भने उपप्रमुखमा सोही पार्टीका उम्मेदवार सुनिता डङ्गाल ६१ हजार ३१८ मत ल्याएर अग्रस्थानमा छिन् । उपप्रमुखमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का रामेश्वर श्रेष्ठले २० हजार ९०६ मत पाएका छन् ।
#२७ वडामा मत गणना
#कसले कति मत पाए ?
#मत गणना सम्पन्न